Baqattoonni Itoophiyaa seeraan ala Keeniyaa keessatti argaman jedhaman 78 hidhaa baatii 3'n adabaman - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Baqattoonni Itoophiyaa seeraan ala Keeniyaa keessatti argaman jedhaman 78 hidhaa baatii 3’n...
Baqattoonni Itoophiyaa seeraan ala Keeniyaa keessatti argaman jedhaman 78 hidhaa baatii 3’n adabaman
Manni murtii magaalaa Ma’u’aa, Keeniyaa, baqattoota Itoophiyaa 78 irratti murtii balleessaa dabarse. Manni murtii kuni baqattoonni balleessan kan jedhe ‘seeraan ala’ (hayyama malee) Keeniyaa keessatti argamuu isaaniiti. Manni murtii kuni tokkoon tokkoo baqattootaa hidhaa baatii sadiin akka adabaman ykn naannoo Doolaara Ameerikaa 500 kafalanii akka bayan murtii dabarseera.
Adabbii kana booda baqattoonni hundi gara Itoophiyaatti darbamu (dirqiin deebifamu).
Baqqattoonni kunniin seera biyyattii cabsuu amananii dhiifama gaafatanis manni murtii kan dhagayu hintaane.
Baqattoonni kunniin kan too’annaa jala oolan naannoo Meeruu jedhamutti. Hanga yeroo qabamaniitti baqattoonni kunniin guyyaa 15’f seeraan ala biyya keessa turan jedhameera.
Baqattoonni kunniin kaayyoo Keeniyaa keessa jiraachuu hinqaban ture. Fedhiifi fuulli hundaa kan ture gara Afrikaa Kibbaatti. Hiree hamaa ta’ee hawwii isaanii, yeroodhaafis ta’u, gufuun guddaan mudateera.
Baqattoota Itoophiyaa gara Afrikaa Kibbaatti imalan gufuun gurguddaan Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Mozaambiiqiifi Malaawii keessatti akka isaan mudatu yeroo adda addaatti gabafamaa ture.
Previous articleKeeniyaa keessa gandi jiraattonni dubartoota qofaa jiraachuu quba qabduu?
Next articleDheerinni dubartiifi umriin ulfaa wolitti hidhata qabaachuun beekame